सावधान ! यी हुन भूलेर पनि गुगलमा खोज्न नहुने १० कुरा, जानी राखाैँ – Lekbesi Khabar
सावधान ! यी हुन भूलेर पनि गुगलमा खोज्न नहुने १० कुरा, जानी राखाैँ
काठमाडौं: सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानिसमा कम्प्युटर, ल्यापटप तथा स्मार्ट फोनको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यस्ता विद्युतिय साधनहरुको प्रयोगलाई इन्टरनेटले थप उपयोगी बनाउँदै लगेको छ ।
१९ कार्तिक २०७६, मंगलवार १३:५० November 5, 2019
गौरीले शेयर गरिन् शाहरुखको पुरा परिवारको फोटो
देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन गरेको रकमबाट मुटु अस्पताल बन्ने